elementaryOS: iyi distro iri kuuya kuRaspberry Pi 4 | Linux Vakapindwa muropa
elementaryOS: iyi distro iri kuuya kuRaspberry Pi 4
Vagadziri ve chepakutangaOS vazivisa kuvaka kwavo kwekuyedza kwemaARM machipisi eiyo Raspberry Pi 4. Mune mamwe mazwi, rutsigiro rwekuparadzirwa uku kunozivikanwa kunoenderana neUbuntu, uye nemhepo "mac", iri kusvika kubhodhi reSBC. Naizvozvo, kana iwe uchinge watoshandisa elementaryOS paPC yako, iwe unofanirwa kuziva kuti iwe unogona zvakare kuzviita pane aya mabhodhi.
Haisi nguva yekutanga kuti chirongwa chekutanga cheOS chipinde munzvimbo dzeARM. Ivo vakatoburitsa yavo yekushandisa sisitimu yeARM-based machipisi muna Nyamavhuvhu gore rino, kuti igone kushanda nePinebook Pro.Zvino, yazvino vhezheni, yekutanga OS 5.1 "Hera" iri kuwana rutsigiro rweyedza rweRaspberry Pi 4.
Linux yanga iriko kwenguva yakareba kumhanya paARM, uye kune zvakawanda zvakagoverwa izvo zvinozviita chaizvo paRaspberry Pi, sezvaunotoziva kare. Asi ikozvino uyu mumwe ajoina, kune vateveri vePantheon.
Chaizvoizvo hachisi chinhu chitsva, iwe unotoziva kuti kwemakore akati wandei, iwo makuru ekuparadzira (Arch, openSUSE, Ubuntu, Debian, ...) anga aripo paRaspberry Pi mabhodhi. Asi izvo zvakachinja mushure mekuburitswa kweRaspberry Pi 4, kunyangwe iwo matsva hunyanzvi maratidziro eSBC iyi zvinoita kuti zvive nyore kumhanya neiyi distros.
Zvino, zvishoma nezvishoma, ma distros akange atove nerutsigiro imwe SBC, Ivo vari kuuyawo kuPi 4, sezvazviri neiyo elementaryOS, kana Ubuntu, iyo imwe nguva yapfuura yakaparurawo yavo yepamutemo 20.10 mufananidzo weiyo Raspberry Pi 4.
Kana iwe uchifarira kuyedza elementaryOS pane yako Raspberry Pi 4 uye usingade kumirira, iwe unofanirwa kuziva kuti vanogadzira vakaburitsa kuvaka pasi pechirongwa chako Kutanga Kuwana Kunovaka. Saka unogona kutomboedza chiitiko kana iwe uchida kuve mumwe wevatsigiri veiyo yekutanga elementOS chirongwa. Kunyangwe iwe uchigona zvakare download ichi chivakwa nekutevera mirairo iwe yaunogona kuwana pane ino repository saiti GitHub.
Ehezve, ramba uchifunga kuti ichi ndicho kutanga kwekuyedza, saka usatarisira kushamisika. Zvinhu zvakawanda zvinoshanda nemazvo, asi pamwe mamwe mabasa haaite, kana ane mamwe matambudziko. Semuenzaniso, kune mamwe graphical matambudziko anoda kuvandudzwa, pamwe nekumwe glitches neinzwi system ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » elementaryOS: iyi distro iri kuuya kuRaspberry Pi 4
Proton 5.13-4: kukunda iyo Cyberpunk 2077 mutambo wevhidhiyo